5 Social Media Marketing amụma maka 2014 | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 15, 2014 Douglas Karr
O kwesiri iju anyi anya na ulo oru mgbasa ozi nke ndi mmadu Onyinye abịawo na usoro ahia ise iji lelee maka 2014 - ihe a nile na-egosi uto banyere elekọta mmadụ media ahịa?
Ndị ọrụ ga - abụ ndị ahịa ọdịnaya.
Ọzọ mmekorita ndi mmadu n'ime ahia ahia.
ejikọ email ya na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ndị ọzọ na-elekọta mmadụ azụmahịa.
Ọzọ mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze n'ozuzu.
Ezie na ọrụ n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịbawanye ụba, enwere m nkụda mmụọ banyere mbọ ire ahịa gbasara mgbasa ozi mmekọrịta. Ekwenyere m na enwere ike ịrụ ọrụ karịa, mana obere mbọ. Ngwaọrụ maka ịre ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ga-aga n'ihu na-emeziwanye ma na-enye ndị na-ere ahịa ihe niile ha chọrọ iji zukọta, ree ma zaghachi mgbasa ozi mmekọrịta - na-enweghị itinyekwu oge ebe ahụ! Site na uto onye ọ bụla ga-abụ mkpọtụ karịa na ọ ga-esi ike ijide ndị ahịa na azụmaahịa ọ gwụla ma ị na-arụ ọrụ dị egwu.
Tags: Commerceemail na mgbasa ozi mgbasa oziahiaenye onyinyeazụmahịa azụmahịaSocial Media Marketing
Jenụwarị 20, 2014 na 11:41 PM
Ihe omuma ihe omuma gi nwere ezi nguzo nke di mfe, di mfe igu ma di nma maka anya.